Banyere ulo oru mbo na ulo oru ulo oru, Atụmatụ, Atụmatụ Nchekwa ihe
A na-echekwa ọtụtụ nde Dollar 100
Ọtụtụ puku ndị ahịa
ebe ọ bụ na 1906
Ọchịchị ndị dị n'elu mba
Akaụntụ Akaụntụ: Esi na Ntak
Chebe Akụ site na Iwu
Nchekwa akụ na enweghị atụ
Nlekọta ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ
Gịnị mere Họrọ OffshoreCompany.com?
Guzobe na 1906
Onu ahia ndi ozo n'uwa dum
Ọ dị mfe nghọta vidiyo
Ndị ụlọ ọrụ na-emepụta ngwa ngwa na akaụntụ
Iguzosi ike n'ezi ihe, ịkwụwa aka ọtọ, ikwesị ntụkwasị obi
Ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-azọpụta gị oge
Ọnụ ego kachasị asọmpi n'ụwa nile
24 / 7 dị ndụ
Nweta ndụmọdụ ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ
Ezigbo ndị ọrụ nkwado
Ụlọ ọrụ, Atụmatụ, na Akaụntụ Banyere Akaụntụ.
Iwu nzuzo kachasị sie ike na iwu ụlọ akụ na ụsọ oké osimiri na-enye ohere maka ego na nzuzo na nchedo ego site na ịgba alụkwaghịm, ndị ụgwọ ụgwọ, ikpe na ikpe.
Ndebanye aha ụlọ ọrụ na Offshore
Ịmepụta ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ na / ma ọ bụ kwaga ebe obibi ụlọ ọrụ gị na ikike nke mba ọzọ nwere ike ịbụ ihe dị mkpa iji chebe akụ gị site na ikpe, Ọzọkwa, ị ga-enwe ike iji ụtụ isi mba ụwa na-emewanye ego gị na mba ọzọ. Ebe nrụọrụ weebụ a dabere na afọ nyocha na e bu n'uche dị ka nkuzi nke nwere ike ịduzi gị site na ịmepụta na iji "ụlọ ọrụ ndị ọzọ." Ị ga-ahụ ọtụtụ uru dị iche iche n'ịmepụta otu mba na-arụ ọrụ gị site na iji akaụntụ bank nke ala ala kama nke, ma ọ bụ na - ejikọta na akaụntụ mpaghara. Nevis, Cayman Islands, Panama, BVI na Hong Kong, dịka ọmụmaatụ, bụ obodo niile mara mma. Ya mere, anyị nwere ike iduzi gị n'ịmepụta ụlọ ọrụ ma ọ bụ Ụlọọrụ nke ịhọrọ. Mgbe ahụ, anyị nwere ike inyere gị aka ịmepụta ụlọ akụ maka azụmahịa gị ma melite ụlọ ọrụ ọfịs dị ọcha.
Iwu Nevis nke iwu na-enye ụfọdụ ihe nchekwa nchedo pụrụ iche ma dị irè iji kpuchie akaụntụ akụ si mba ọzọ site na ikpe.
Kpọọ Maka Nkwekọrịta Na-adịghị
Nyefee akwụkwọ edemede gị
Ụlọ ọrụ na Ụlọ akụ
Enwere uru ụtụ isi
Iji dokwuo anya, ịzụ ahịa n'èzí abụghị maka ịchụpụ ụtụ isi ma ọ bụ ịkwụ ego n'aka gọọmentị. Kama nke ahụ, ọ bụ maka ịhazi ihe omume gị n'ụzọ dịka iji mee ihe iwu obodo na nke ụwa. Iwu ndị a dị maka onye ọ bụla nke na-echebara iji ha mee ihe maka uru ha bara. Ya mere, anyị nwere ike igosi gị ụzọ zuru oke na iwu ziri ezi iji guzobe azụmahịa gị n'ụwa niile ka i wee ghọta uru dị ukwuu nke nchedo ego na-efu.
Ndị bi na United States, UK, Australia na ụfọdụ mba ndị ọzọ, na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ n'ụwa niile ego. N'aka nke ọzọ, ọ ga-abụ na ị maara na Apple, Google na ndị ọzọ akwachala ego ha ji eji akwụkwọ ụtụ isi mee ihe site n'iji usoro iwu zuru oke site na iji ụlọ ndị esenidụt. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ inshọransị na-adọrọ n'agha bụ ụzọ ọzọ ndị ahịa anyị si gbasaa ụgwọ ụtụ isi ha n'okpuru IRC 953 (d) na 831 (b). N'ihi ya, e nwere ụzọ ndị ị ga-esi nwee ike ime nke a, yana enyemaka anyị gbakwunye nduzi nke ndị ọkachamara na ikikere ruru ikikere.
Anyị enweghị ike imesi okwu ikpeazụ ahụ ike. Uru ndị ụtụ isi na-akwụ ụgwọ bụ akụkụ dị mma nke iwu. Ya mere, tupu i jiri usoro mba ụwa maka atụmatụ ụtụ isi, jide n'aka na ọ bụghị naanị CPA ka ị na-ekwurịta okwu. Soro onye ọka ụtụ na / ma ọ bụ onye ụtụ isi na-akwụ ụgwọ na-enyere ụmụ amaala na ndị bi na mba ọzọ aka. Ị ga-enwe ike ịmegharị odide na agba agba. Ọzọ, ị ga na-ehi ụra n'abalị, kwa.
Nlekọta Ụlọ Ọrụ Online
Otu ụzọ ị ga-esi nwee ọganihu nke ọma bụ iji n'aka ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ iji rụọ ọrụ azụmahịa gị n'ịntanetị. Ọ bụkwa usoro eji Apple na Google. Ọ bụrụ na azụmahịa gị dabeere n'ịntanetị ma ịkwado ụlọ ọrụ ụwa gị n'ụzọ zuru oke, ya mere, ọ nwere ike ịnwe uru ụtụ isi dị mma. Nke a nwere ike ịkwụsị ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ, dịka IRA, dịka ọmụmaatụ. Ọ dị oke mkpa ka ị nweta ndụmọdụ ụtụ isi nke onye CPA maara ihe nke ga-eduzi gị n'iji usoro a. Iji ngwá ọrụ ndị a iji chekwaa ego na ụtụ isi nwere ike ịdabere na obodo gị na ụmụ amaala gị na ọnụ ọgụgụ pasent nke nwe ụlọ ọrụ, n'etiti ndị na-eme ihe nkiri. Ya mere, a ghaghị iji ya mee ihe n'okpuru nduzi nke ndụmọdụ ụtụ isi.
Azụmahịa azụmahịa nwere ike ịnwe isi ahịa ụwa. Dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ ịmepụtawanye ndị ahịa gị site na oge 22? Ndị bi n'èzí nke United States bụ banyere 22 ugboro karịa karịa. Ndị ụwa bi n'èzí UK bụ 109 ugboro karịa, 200 dị ukwuu n'èzí Canada na 304 ugboro n'èzí Australia. Ị nweta echiche ahụ. Gini mere i kwesiri iji kpachapu onwe gi n'omume ochie eji eme ka ihe ndi mmadu mara? N'ihi ya, ịmepụta ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ na ụlọ akụ akụ na ụma iji mee ka azụmahịa gị n'ịntanetị bụrụ ụzọ dị mma iji wulite ike n'èzí mba nke ị bi.
N'ime obere oge ị na-ede akwụkwọ ikpe, onye ọka iwu nwere ike ide akwụkwọ ọzọ na-akwụ ụgwọ ụlọ akụ gị, ụlọ gị, azụmahịa gị, na akụ ndị ọzọ. Otú ọ dị, ịrụ ọrụ azụmahịa n'ọdụ ụgbọ mmiri na-eme ka nnukwu ihe mgbochi nye ikike ị nwere ike ijide onwe gị na ịdọrọ ihe onwunwe gị siri ike.
Ogologo otutu nke ego
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-abanye n'oge nsogbu? Cheta nhaghachi US na Europe nke 2008, 2009 na afọ ndị ọzọ? N'oge ahụ, akụ na ụba dị n'Ebe Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Australia nọ na-agba ọsọ. Site na ịnweta igwe onwuru ego, ị na-ejedebe ka ị na-ekpughe na akụ na ụba mpaghara.
Gini mere inwe otutu ulo oru ahia n'ịntanetị n'otu oge?
Ọnụ ego dị ala iji guzobe ọtụtụ ụlọ ọrụ na akaụntụ dị n'akụkụ, yana ọrụ mmepe mkpokọta ọnụ ala dị ala na-eme ka ntinye ego mbụ belata na bọket ma ọ bụrụ na e jiri ya mee ihe dị egwu. Nzukọ anyị na-enye ọrụ ndị a niile, ma nwee ọtụtụ iri puku ndị ahịa. Ọ bụrụ na onye ọrụ ubi chọrọ iwe ihe ubi, ọ ga-ebu ụzọ kụọ mkpụrụ ahụ. Ọ bụghị mkpụrụ nile tolitere mana ọtụtụ n’ime ha na-etolite; ndi n’eme nka gha eme ya ya na ezi na ulo ya rue otutu oge.
Ụlọ ọrụ malitere na 1906. Anyị na-agbasi mbọ ike maka ọrụ ego na mba ndị ọzọ na nchedo akụ na ụba site na ikpe. Ụlọ ọrụ anyị enyela aka n'iwu na Nevis, Cook Islands na Dominica. Ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ anyị na-agwa ndị isi obodo okwu mgbe niile ka ha nwee ike ịme iwu na mmasị ndị ahịa anyị.
Anyị Na-ede Iwu
Companylọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ nyere aka na iwu na Nevis, Cook Islands, Dominica na Congo. Anyị na ndị isi obodo na-ezukọ mgbe niile iji kwalite usoro nhazi ha.
Onye isi oche anyị na Vance Amory, Premier nke Nevis (1992 - 2006 na 2013 - 2017)
Onye isi anyi na Roosevelt Skerrit, Minista nke Dominika
Onye isi ala anyị na Clément Mouamba, Prime Minister nke Republic of Congo (Brazzaville) na Attorney Attorney Yonathan Amselem
Onye isi oche anyị na Mark Brantley, Premier nke Nevis (2017-Ugbu A)
Anyị na-ekele ndị ahịa
Nnukwu ọrụ, ekele maka ọrụ gị niile.
M na-emezigharị ụdị ntanetịị na ntanetị ndị ọkachamara na-edepụta akwụkwọ m.
Achọrọ ikwu na enwere m mmasị na àgwà nke ọrụ. Ọpụrụiche !!! Anyị natara akwụkwọ ọrụ ụlọ ọrụ na EIN na akwụkwọ ozi nke gọọmentị gọọmentị n'ụtụtụ a. Enweghi ike inwe obi uto. M ga-eme ka onye ọ bụla mara ihe nnukwu ụlọ ọrụ ị bụ. Daalụ, Ron & Roxy A.
N'iji ngwa ahia ahia ahia, ana m echekwa ego m nwere na ego onwe m site na ikpe nwere ike imebi.